Pentekosta: Fiainam-baovao sy Fiadanana Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Fanorenana sy vaovao Toby, asa fanentanana 12/05/2017
Miarahaba antsika rehetra mankalaza indray ny Andro Pentekosta!
Inona moa ny « Pentekosta »?
Fahizay, Andro fetim-bokatra teo amin’ny Zanak’Isiraely ny « Pentekosta »; fanolorana ho an’Andriamanitra izay tsara indrindra avy amin’ny voaloham-bokatra. Fanolorana fanati-pisaorana ho an’i Jehovah, avy amin’ny voaloham-bokatra; dimam-polo andro aorian’ny Paska, fisaorana noho ny fanavotana avy tany amin’ny fanandevozana tany Egypta.
Ny Pentekosta dia fety ifalifaliana noho ny fandresena nataon’Andriamanitra tamin’ny Paska; na tamin’ny Jiosy nony nanafahana azy ireo tany amin’ny tany Egypta, na amin’ ny Fiangonana Kristiana, tamin’ny fandresen’i Kristy ny fasana ka nitsanganany tamin’ ny maty. Mariky ny fandriam-pahalemana na fiadanana ihany koa izany.
Misy fahasamihafana lehibe, anefa, ny votoatiny teo amin’ny Jiosy sy amintsika kristiana; teo amin’ny Jiosy dia ny olona no manome zavatra ho an’i Jehovah ho fisaorana Azy.
Ny antsika kristiana kosa indray dia Andriamanitra no manolotra « Fanomezana Sarobidy » ho an’ny olona, dia ny Fanahy Masina, araka izay efa nataony ho an’ny mino an’i Jesosy ny amin’ny fandresen’i Kristy. Fiainam-baovao no vokatry ny fandresen’i Jesosy Kristy, dia fiainana vaovao ho an’izao rehetra izao. Mitondra fifandraisana vaovao amin’Andriamanitra sy izao rehetra izao koa izany.
Fanomezana lehibe ho an’ny Fiangonana tsy misy toa azy izany, ry havana, satria miaina feno ny fiadanan’Andriamanitra amin’ny fanomezany ny Fanahy Masina; fampiraisana antsika amin’i Kristy izany ka andraisana ny Fiadanany.
Mirary Pentekosta feno ny Fiadanan’ny Tompo ho anao!
[Pastora RANDIMBISON Jacques Euloge]